गर्भवतीमा थाइराइड भए के गर्ने ?
मीनु सिंह आइतवार, भाद्र २५, २०७४
6563 पटक पढिएको
मूलपानीकी कमला खड्का (२५) गर्भवती भएको तीन महिना भयो । शुरुमा वाकवाकी लाग्ने, टाउको दुख्ने, खान मन नलाग्ने, पेट पोल्नेजस्ता लक्षण देखिँदा उनी निकै आत्तिइन् । गर्भावस्थाको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा यस्ता लक्षण देखिनु सामान्य भएको सासूले सुझाएपछि उनी केही शान्त भइन् ।
विस्तारै उनमा टाउको दुख्ने, चिटचिट पसिना आउने, कपाल झर्ने, शरीरको तापक्रम बढ्ने, दिसा लागिरहने, आत्तिनेजस्ता लक्षण देखा परे । गर्भवती अवस्थामा अस्वाभाविक लक्षण देखापर्न थालेपछि उनी चिकित्सककहाँं पुगिन् । स्वास्थ्य जाँंच गराउँदा थाराइराइड भएको थाहा पाएपछि उनी तर्सिइन् । भन्छिन्, ‘सामान्य होला भन्ने सोचेकी थिएँ, रिपोर्टमा थाइराइड देखिएपछि होसहवासै उड्यो ।’ उनी थाइराइडको नियमित औषधि खाँदैछिन् ।
यस्तै, बानेश्वरकी सरस्वती रिमाल (२७) गर्भवती भएको चार महिना भयो । विगत चार वर्षदेखि उनी थाइराइडसँंग जुध्दै आएकी छन् । नियमित औषधि सेवन गर्न झन्झट लागेपछि उनले बीचमै खान छाडिन् । पछि गर्भ बसेपछि उनी स्वास्थ्यजाँंचको लागि चिकित्सककहाँं जाँंदा आफूलाई पहिलेदेखि नै इराइड भएको जानकारी गराइन् । औषधि फेरि शुरु गर्नुपर्ने भयो । औषधि खाए पनि उनी भने थाइराइडकै कारण जन्मने शिशुलाई असर गर्ने पो हो कि भन्ने पिरलोमा छिन् । उनी भन्छिन्, ‘शुरुमा थाइराइड सामान्य रोग होला भन्ने सोचेकी थिएँ, यसले शिशुलाई पुर्‍याउन सक्ने खतराबारे थाहा पाएपछि भोग, निद्रा लाग्नै छोड्यो ।
गर्भावस्थामा थाइराइड ग्रन्थीमा गडबडी हुँंदा हर्मोन उत्पादनमा थपघट हुन्छ । थाइराइड हर्मोन कम या बढी हुँंदा त्यसले फरक–फरक समस्या पैदा गराउँछ । गर्भावस्थामा देखिने न्यून मात्राको थाइराइडले गर्भ तुहिने, गर्भ बसिहाले पनि जन्मने शिशुमा गम्भीर समस्या आउने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
थाइराइडकै कारण दुई महिनाको गर्भ खेर गयो थाइराइडपीडित सीता पौड्याल (२६) को । उनको पीडा सरस्वती र कमलाको भन्दा कम छैन । अल्छी लाग्ने, छटपटी हुने, टाउको दुख्ने, साथै कहिलेकाहीँ मुख सुक्खा भएर सास फेर्न गाह्रो हुन्थ्यो उनलाई । गर्भ बसेसँगै थाइराइड पनि देखिएको थियो । पौड्याल भन्छिन्, ‘औषधि सेवन गरे पनि थाइराइडको मात्रा घटेन, अन्त्यमा तीन महिना पुग्नै लागेको बच्चा पनि खेर गयो ।’ अहिले उनी नियमित औषधि सेवन गर्दैछिन् । थाइराइडका कारण गर्भसँगै बच्चा जन्माउने उनको सपना पनि तुहियो । भन्छिन्, ‘आमा बन्ने सौभाग्यबाट कतै विमुख पो भइन्छ कि । यो थाइराइड भन्ने रोग त शत्रुलाई पनि नलागोस् ।’
थाइराइड मानव शरीरको एउटा ग्रन्थी हो । यसको काम थाइराइड हर्मोन उत्पादन गर्नु हो । यो घाँटीको अघिल्लो भागमा रुद्रघण्टीको तल रहेको हुन्छ । चिकित्सकका अनुसार आवश्यकभन्दा बढी हर्माेन उत्पादन हुनुलाई हाइपर थाइरोइडिज्म र कम हर्मोन उत्पादन हुनुलाई हाइपो थाइरोइडिज्म भनिन्छ । यसमा न उमेरको सीमा हुन्छ, न त रोक्नै सकिन्छ । हर्मोन तथा थाइराइड रोग विशेषज्ञ डा. ज्योति भट्टराईका अनुसार थाइराइका बिरामीमा फरक–फरक लक्षण देखिन्छ । प्रायः गर्भवतीमा न्यून थाइराइड देखिने गर्छ । डा. भट्टराईका अनुसार महिलाले गर्भवती हुनुभन्दा अघि स्वास्थ्य जाँच गराएर नियमित औषधि सेवन गरे स्वस्थ शिशु जन्माउन सक्छन् ।
डा.भट्टराईका अनुसार अरू रोगजस्तै थाइराइडका बिरामी दिन÷प्रतिदिन बढ्दै गएका छन् । पहिले पहिले आयोडिनयुक्त नुनको अभावमा यो रोग लाग्ने गरेको बताइए पनि पछिल्लो समय आयोडिनयुक्त नुन सेवन गर्नेहरू पनि यो रोगबाट प्रभावित छन् । डा. भट्टराईका अनुसार नेपालमा थाइराइड रोगबारे खासै अनुसन्धान हुन नसके पनि पुरुषको तुलनामा महिला बढी प्रभावित छन् ।